အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
မေး-510N စီးရီး အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ရှိ ကျစ်လစ်သော ဒါပေမဲ့ အားကောင်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ညီ သို့ ပေါကျကှဲခွငျး-အထောက်အထား stနှင့်ard.Because ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော ဘို့ အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် လုံခွုံသော စစ်ဆင်ရေး. ကျွန်တော်တို့၏ မေး-510N စီးရီး အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် ဤ လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှု။
ဝင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော weatherproof IP67 / NEMA4 & 4x (စံ) IP68 (Option ကို)
OMRON: စက်မှု switch သည် Switch
1. Cam setting ကို
ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုအလွယ်တကူနှင့်တိကျစွာရေးကိရိယာများမပါဘဲသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်မေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထား၏ cam ။
အဝါရောင် cam ပွင့်လင်း, အနီရောင် cam အဘို့ဖြစ်၏နီးစပ်အဘို့ဖြစ်၏။
မေး-510N ၏ညွှန်ပြချက် panel ကစီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ကိုဗဟိုဝင်ရိုးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အနေအထားအရိပ်အယောင်ပါစေ။
အစိုင်အခဲများနှင့်ဒီဇိုင်း, လူမီနီယံသေ-casting အိုးအိမ်များနှင့်အမှုန့်အင်္ကျီကိုလှပသော 3.
1. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာစက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
2. အသီးအသီးမေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက်အသုတ်ကုဒ်ဖူး, ကောင်းတစ်ဦး traceability ရှိထားသည်။
Q: ငါတို့အဘို့အညာဘက်အဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ကိုရှေးခယျြနိုငျမလဲ
A: ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သော power supply ဗို့အဖြစ်သင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ, torque တန်ဖိုးကိုပေးပို့နိုငျသညျ, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအသင့်တော်ဆုံး actuator ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင်ငါ့ကိုမေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ anout ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်ငါ့ကိုသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အကြောင်းကိုမေးလ်နှင့် ia သူသည်သင်တို့ကိုမလိုအပ်သတင်းအချက်အလက် detal သင်ပို့ကြည့်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
မေး: သင်၏မေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာတစ်ခုအမိန့်များနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကဘာလဲ?
ဖြေကျနော်တို့သင်သည်ငါတို့မှပင်တဦးတည်းအပိုင်းအစဝယ်နိုင် value.So နိမ့်ဆုံးအမိန့်အဘို့မေတ္တာရပ်ခံချက်မရှိကြပါဘူး။
hot Tags:: အခင်အရှင် အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်